Warshadda Diyaarinta Tusaalaha - Soosaarayaasha Diyaarinta Muunada Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Qalabku wuxuu isku xiraa howlaha muhiimka ah sida kuleylka iyo xakamaynta heerkulka, soo saarida, soo kabashada dareeraha, iyo qalajinta kahor, taas oo sahleysa in la sameeyo tijaabooyin.
DRK-FX-D302 Qaboojinta-Biyo La'aanta Kjeltec Azotometer
Iyada oo ku saleysan mabda'a habka Kjeldahl Azotometer waxaa lagu dabaqayaa go'aaminta borotiinka ama wadarta guud ee nitrogen, quudinta, cuntada, abuurka, bacriminta, muunadda carrada iyo wixii la mid ah.
DRK-FX-836 Qalabka Dheef-shiid kiimikaadka garaadka leh
Dheef-shiidku waa qalab horay-loogu-baaraandego falanqaynta qaybaha iyo tijaabinta. Marka falanqaynta muunada iyo tijaabada kormeerka deegaanka, kormeerka beeraha, kormeerka badeecada
Dheef-shiidku waa qalab horay-loogu-baaraandego falanqaynta qaybaha iyo tijaabinta. Marka falanqaynta muunada iyo tijaabinta kormeerka deegaanka, kormeerka beeraha, kormeerka badeecada, iyo waaxyada kormeerka tayada, saamiga kahortaga waqtiga xisaabinta
DRK-FX-306 Saxanka kululaynta